Ungayilungisa njani umzimba ngomnyaka omtsha?
Ngexesha leeholide siyaziphucula kwaye asikwazi ukuchasa iintlobo zeesitya kunye neziphuzo kwiitheyibhi zokuzonwabisa. Imiphumo ayinakukulinda, iiplundi eziliqela ezongezelelekileyo ezinqamlekileyo ezinqeni nasezinqeni zakho, ubunzima esiswini kunye nobuthakathaka obukhulu ixesha elide liya kukukhumbuza iholide ezigqithiseleyo. Ungayilungisa njani umzimba wakho ngoNyaka omtsha, ukuze kamva ungadli ngokutya kwaye uhlele ukulayishwa kweentsuku?
Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kokutya okunamafutha kunye neziyobisi, kunye kunye nokuhamba okuphantsi kweeholide, kuphazamisa inkqubo yokutya. Utywala uthintela ukurhoxiswa kwezinto ezinobungozi ezivela kwi-toxins evela emzimbeni, kwaye ukusetyenziswa kwayo ngokweqile kunokukhokelela ekuphulaphuleni imisebenzi yepascreas. Ngenxa yoko, kunokwenzeka ukunciphisa umlwelwe, ubuthathaka obuninzi, ukunyaniseka. Ukongeza, i-intemperance emva kwetafile yonyaka omtsha ichaphazela ngqo imeko yesikhumba neenwele.
Ukulungiselela umzimba woNyaka omtsha kunye nokunciphisa imiphumo emibi yokusela nokutya kwi-Eva kaNtshonalanga, zilungiselele ixesha elincinci lobomi obunempilo - i-pretox. Inkqubo yokulungiswa kweprotox yeprotox yokunyusa imithwalo enomsoco kunye neetyhefu.
Ukwandisa ukusebenza kweprogram yeprotox, qalisa malunga neeveki ezingama-2-3 ngaphambi koNyaka omtsha.
Qinisekisa i-microflora yamathumbu kwaye uxhasane ne-immune system iya kunceda "uphile" i-yogurts. Phuza enye yogurt rhoqo emva kokuhlwa. Faka iimveliso ezinomxholo ophezulu we-prebiotics, umzekelo iimveliso zobisi, iibhanana, izityalo, izityalo zokutya, iinkozo zommbila, anyanisi, igalikhi. Gcina urhulumente wesondlo - udle ngexesha, unike ukutya, ungadli.
Ncedisa isibindi sakho ukususa iibhoksi eziqokelelwe ngeeholide, zihlambulule. Ukwenza oku, iiveki ezimbalwa ngaphambi koNyaka omtsha, udle ngokufanelekileyo, udle amanzi amaninzi, ulahle ikhofi kunye notywala. Ukongeza izidlo zabo ukutya okutya okusanhlamvu, njenge-oatmeal okanye irayisi e-brown. Ukukhawulezisa ukukhuseleka kwe-bile kunye nokuhlanjululwa kwesibindi, iifuno eziluhlaza eziluhlaza ezifubeni kunye ne-magnesium ziya kunceda.
Nika ixesha ngexesha lokutya okunzima, unike iinketho zakho kwimifuno neziqhamo. Ukuba awukwazi ukuhlala ngaphandle kwenyama, yidla encinane yenkomo yenkomo okanye imvana ephantsi. Ukuphelisa kwiindawo zakho zokusela iziphuzo, ukutya okunqabileyo okunqabileyo, ukutya okusemathinini.
Sihlambulula umzimba weeslayidi
Kwisisu esingenalutho, sisele iglasi yamanzi kunye namaconsi ambalwa e-juice e-fresh lemon, e-juice kunye nenani elincinci lobusi. Kwimizuzu eyi-15 ungadla isidlo sakusihlwa. Inkqubo enjalo elula yentsasa iya kuxhasa i-organic dishydrated ngobunzima kwaye ihlambulule i-toxins.
Iiphunga ezifanelekileyo zeprotox yile nkqubo: i-apple juice silderei kunye neparsley; isanqante nejinger juice; i-juice kwi-apula, i-beet kunye ne-sauce; kunye nejusi, equkethe izaqathe, beet kunye ne-ginger. Phuza i-post-narcotoxic juice ngosuku ukukhawulezisa umveliso we-collagen kunye nokuphucula imeko yolusu. Ukongeza, kwiijusi zangaphambili ziqukethe inani elikhulu lamavithamini.
Khetha ukutya kunye nemifuno yokutya
Ukuba unomdla wokulamba, kwaye ngaphambi kokuba ixesha elisisidlo siphelile, yidla imifuno encinane okanye isiqhamo se-snack. Inzuzo enkulu emzimbeni wakho ngexesha lokulungiselela iiholide iya kuba ziqhamo neziqhamo njenge-artichoke, i-broccoli, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, iklabishi kunye ne-watermelon.
Ukugcina ukhuseleko, ukuthatha amavithamini B, ngenxa yoxinzelelo kunye nokungabikho kokulala, umveliso wabo emzimbeni wehla. Ukwandisa umlinganiselo we-vitamin C (ongaphantsi kwama-500 mg ngosuku), i-Omega-3 ne-Omega-6. Phuza ikhosi yeziyobisi kunye ne-zinc ne-echinacea.
Thola ukulala ngokwaneleyo
Ukunqongophala kweholide akuyi kuba uxinzelelo kumzimba wakho, qwa lasela kwangaphambili. Njengoko uyazi, ukungabikho kokulala kukuchaphazela imeko yesikhumba sethu, kuba kubudeni bokulala ukuba amaseli ekhumba abuyele iiseli zawo. Ngoko ke, ubuncinane iveki ngaphambi kweeholide, zama ukulala okungenani iiyure eziyi-8 ngosuku. Ngaphambi kokuba uye embhedeni, cima zonke izixhobo zombane ezisuka kwiindawo zokuthengisa kwaye uphumelele kwigumbi, oku kuya kuphucula ukulala kwakho.
Ukungabikho komzimba ngexesha leeholide kwenza inkqubo yakho yokugaya isisu, engakhokelela ekuvupheni okanye ekuqhenqeni. Ngoko ke, zama ukuhamba kancinci kwintsuku ehamba phambili emoyeni, yenza ukuzivocavoca kwakho okuthandayo kunye nokulula.
Zonke ezi ngcebiso zilula ziya kukunceda uhlangabezane noMnyaka omtsha ngokugqibeleleyo "ukulwa" ukulungela, ukuba ungayitholi iipounds ezongezelelweyo kwaye uzive ulungile emva kweeholide.
Iindlela ezinobungozi zobungqina bentsha
Ukuthintela nokunyangwa kweengcambu zeengono
Iphupha eliphuphayo okanye iindlobongela - isilumkiso sokuqala kwezifo
Iindlela ezili-15 ezilula zokuphucula ukulala
Unesihe esibuhlungu, yintoni oyenzayo?
Oomnxeba oomntu wesini
Ukuhlamba ngexesha lokuya esikhathini: unakho okanye awukwazi?
Indoda ichaphazela njani umfazi
Iidonutshi nge jam
Indlela yokufumana ubunzima kwaye uphinde ufune ukutya
Iintsana kunye neentlanzi
Umaski weenwele ezivela kwimveliso yemvelo
Iifowuni eziphekiweyo zengxowa ngesithombe
Isaladi kunye nommbila kunye nenkukhu
Ukuba unesifo seengqondo
Iingcebiso ezili-10 malunga nendlela yokugcina impilo yakho